Lelee Profaịlụ nke 70 zuru ezu RayHaber
Kedu mgbe Karaman Konya High Speed ​​Line Open?
Olee mgbe Karaman Konya High Speed ​​Line Line ga-emepe ?; Karaman Republic Party Ndị mmadụ Karaman Vice Att. İsmail Atakan Ünver, Iwu mmefu mmefu ego nke 2020 nke Central Gọọmentị Central, nke a tụlere na thelọ Ome Iwu na andlọ Mmefu Mmefu. [More ...]
Turkey lọjistik Master Plan na lọjistik Centers; Logjitalụ: Ndị a bụ mpaghara ebe ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ metụtara ụgbọ njem mba na nke mba, logistics na nkesa nke ibu n'ime etiti. Ọnọdụ nke ebe agha dị [More ...]
Turkey si ọsọ na ot Railway Construction Projects; Na mgbakwunye na ọrụ ụgbọ oloko dị elu, a na-aga n'ihu na-arụ ma na-arụkwa okporo ụzọ ụgbọ oloko. 1.480 km okporo uzo di elu na [More ...]
Nke a bụ ọnọdụ kachasị ọhụrụ na ọrụ ụgbọ oloko a na-ejedebeghị
Nke a bụ ọnọdụ kachasị ọhụrụ na arụ ọrụ ụgbọ oloko dị elu anaghị agwụ agwụ; Turkey eyiri na ala ụgbọ okporo ígwè na anya nso, onye na-amụ gafee mba malitere a mkpirikpi mgbe gara aga. Bido n’oge dị iche iche n’ọtụtụ mpaghara [More ...]
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa M. Cahit Turhan nyekwara aka na mmepe nke njem njem nke Konya-Karaman-Mersin-Adana HT, nke e mere atụmatụ ịhụ na ebufe ngwa ngwa site na Konya, Karaman na Kayseri na Port Mersin. [More ...]
Obodo Karaman, ebe nnochi anya na uzo di warawara banyere uzo abuo ndi apuru apu nke enyo enyo enyo enyo dika enyo. Karaman Obodo Directorate nke ationgbọ njem, ma ọ bụ [More ...]
Ndozigharị nke Bus Stations na Karaman
Obodo Karaman, nke na-etinye ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ na mpaghara achọrọ na Karaman, na-eji nnochi ndị ọhụrụ ọhụụ dochie nkwụsị ochie. Obodo Karaman, nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya na mkpa obodo, na-eme ka ndị obodo nwee ezigbo njem njem nke ọma. [More ...]
Arụnyere igwefoto nchekwa na Bgbọala obodo na Karaman
Ejiri eserese nchekwa na bọs ndị ime obodo na-enye ọrụ njem ọhaneze na Karaman. N'ihi ya, ndị njem ga-enwe njem nchekwa nke njem na njem obodo mepere emepe. Karaoti nke Karaman Karaite [More ...]
Akwụsị Azụ Na-egbukepụ
Ndi otu Karama Municipality Science Work bidoro oru oku na mbido nke Larende Underpass. Obodo Karaman gara n'ihu na-arụ ọrụ na mpaghara ọkụ adịghị. Ahịa ọka nke Larende Underpass nke na-ejikọ n'etiti Karaman na Larende Quarter [More ...]
Martyr Muhammed Yalcin na Street Kizilay na-enwu
N’ikwekọ n’ọchịchọ nke Karaman chọrọ, ọkụ ndị a na-enwe n’okporo ụzọ Mazị Muhammed Yalçın na Kızılay Street na-aga n’ihu n’aka ndị ọchịchị Medaş. Ndị ọchịchị obodo, ya na ọchịchọ na ihe ụmụ amaala anyị bi na TOKI Martyr Muhammad a ka mere ọhụrụ [More ...]
Ụzọ ụgbọ elu dị elu ga-aga n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ
Nzọụkwụ mbụ nke okporo ụzọ Konya-Karaman-Mersin, bụ nke ga-ejikọta Central Anatolia gaa n'ógbè Mediterenian, a na-ezube ịmalite ụgbọala nyocha nke Konya-Karaman na njedebe nke afọ. Seyahat Oge njem n'etiti obodo abụọ 40 nkeji hızlı Na-aga n'ihu ngwa ngwa [More ...]
Usoro Konya-Karaman High Speed ​​Line agwụla
Nzọụkwụ mbụ nke ụgbọ okporo ígwè Konya-Karaman-Mersin, nke ga-ejikọta Central Anatolia dị na Mediterenian, kwụsịrị na mpaghara Konya-Karaman. A na-atụ anya na a ga-eme usoro nyocha ahụ na njedebe nke afo a ma ihe mgbaru ọsọ bụ iburu nde mmadụ abụọ kwa afọ. ọbụna [More ...]
Ịdọ aka ná ntị site na TCDD
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) 6. Mpaghara mpaghara, Adana, Mersin, Osmaniye, Konya, Karaman, Nigde, Gaziantep, Kahramanmaras, ógbè Hatay n'ókè nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọelu na-alụ ọgụ 18-28 June 2019 [More ...]
Ejiri ọtụtụ ndị na-amụ akwụkwọ banye na YKS na Karaman
Obodo Karaman, izu ụka a ga-enwe ụlọ nyocha dị elu (YKS) n'ihi ndị ndoro-ndoro ahụ mere ụfọdụ ihe iji kwado ohere ịbanye na ngalaba nyocha. Karịsịa dabere na ike a ga-enwe na ngalaba ụlọ akwụkwọ ebe a ga-eme ule [More ...]